Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 29/12/2019)
Ireo Top Tips ho an'ny biby fiompy mandeha amin'ny tokony hanampy hanamaivana ny fanahiana. Satria ndao hatrehina izany, niara-dia ny biby fiompy ny saina! Fa inona no mampiady saina kokoa, dia ny mieritreritra ny handao ny biby any an-trano na eo amin'ny fikarakarana ny hafa. Mazava ho azy fa tsy misy olona mijery nanaraka azy ny fomba atao! Right?
Misy ny safidy maro ny zavatra tokony hatao rehefa mandeha ianao ao an-trano. Dog trano fandraisam-bahiny, fandraisana mpiasa avokoa ny mpikarakara na ny famindrana ny enta-mavesatra, sira mbola misy mahafatifaty iray, ny namanao dia eo amin'ny safidy. Ireo no tena fahita ny olona mampiasa. Na izany aza, indraindray tsy misy safidy hafa, ary tsy maintsy mandeha amin'ny biby. Na dia mety ho tena sarotra ny fomba fanao, Save A Train manana toro-hevitra ambony izay hanampy anao ianao, raha niara-dia biby fiompy!
Traveling ny vaovao sy ny toerana dia mety ho saina angamba noho ny biby. Ka manao antoka fa mbola ho tony araka izay azo atao ny fanalahidin'ny lavitra ny aina ho an'ny olona rehetra mandray anjara. Ento ny tapaka na ny kilalao, bodofotsy ary zavatra hafa izay mety hahatonga ny alika na ny saka aina. Tony izy ireo, ary tsy hanao zavatra ratsy? Ataovy azo antoka Hianao no mamaly azy ireo ho niara-biby fiompy aina kokoa amin'ny ho avy.
Na tianareo na tsy, Soso-kevitra ho an'ny Top ireo niara-dia ny biby fiompy dia midika ianao iany no hanao fanatanjahan-tena sasany amin'ny teny! Taloha kelin'ny manomboka mandeha, hitondra azy ireo nandritra ny fanatanjahan-tena matanjaka! Noho ny fanampiny-tongotra lava, na ny mafy amin'ny malala playtime malefaka namana, izy mety ho reraka ihany koa ny manahy momba ny zava-. raha efa nahazo saka izay tsy mba tia ny no nalaina ho amin'ny hazakazaka, miezaka mandrisika azy ireo ao. -Fiovàna kilalao ho afaka ny ho tonga ao amin'ny endriky ny vovoka MOPS ohatra! Matokia ahy… Manana traikefa in niara-dia biby fiompy!
Firenena samy hafa isan-karazany takiana manana. Maro ny firenena mitaky ny fanokanan-toerana vanim-potoana, ka raha te-handany fotoana nandeha amin'ny biby fiompy, ho azo antoka ianao avo roa heny-jereo ity! Ny ankamaroan'ny firenena mitaky tifitra for haromotana, bordetella (tarehy ho azy manokana mikohaka), ary parvo. Antsoy ny masoivoho sy ny manao ny fikarohana an-tserasera mba hahitana izay takiana dia ny firenena, ary ho azo antoka mba manana ny antontan-taratasy mora raisina, rehefa niampita ny sisintany.
Azonao atao ny fikarohana momba ny niara-dia biby fiompy sy ny zavatra takiana ao amin'ny firenena PetTravel.com.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Top Tips Fa niara-dia ny Pets” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#animallover #biby #cats #dogs #pets #pettips #travelingpets #travelwithpets europetravel trainjourney